7 နေပယ်မှာအီတလီနိုင်ငံကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား >7နေပယ်မှာအီတလီနိုင်ငံကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း
နေပယ်လ်ဟာအံ့သြစရာဖြစ်ပါသည်, quintessential အီတလီမြို့. ဒါဟာတောင်ကုန်းနှင့်ပြည့်စုံသည်, အဟောင်းအဆောက်အဦးများ, နှင့်အခြားအသေးစားနှင့်ချစ်စရာအံ့ဘွယ်သောအမှု. ဒါဟာစစ်မှန်အီတလီဝိညာဉျကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့လိုလားတဲ့သူကိုလူတိုင်းနဲ့နေပယ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်များအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့စုံလင်သောအီတလီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်.
သို့သျောလညျး, သောသူအပေါင်းတို့သည်မဖြစ်. သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် အံ့ဖှယျပီဇာများအတွက် Naples ကိုသွား သူတို့လုပ်. အဆိုပါပီဇာသငျသညျကမ်ဘာပျေါတှငျဘယ်နေရာမှာမဆိုငျတှေ့နိုငျနေ့စဉ်မျိုးမဟုတ်. အဆိုပါနာပိုလီပီဇာထူးခြားတဲ့တစ်ခုခုသည်နှင့်လိုက်ဖက်မရနိုငျသောအရသာဂုဏ်ယူ.
ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ digress. သငျသညျ Naples အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာဖွေလိုလျှင်, သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အချိန်ကိုမဖြုန်းသင့်တယ် မြို့ရဲ့အလှတရားမှာအံ့သြချီးမွမ်းကြ နှင့်သူတို့၏ဘုနျးကွီးသောပီဇာစားခြင်း. သင်တို့သည်လည်းပတ်ဝန်းကျင်သွားရောက်ကြည့်ရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ်. နေပယ်လ်ကိုအီတလီအားလုံးအတွက်အလှဆုံးပတ်ဝန်းကျင်အချို့ကိုဂုဏ်ယူဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကဖြစ်ပါသည်. သငျသညျအများကြီးတွေ့နိုင်ပါသည် - အကြီးအကျယ်ပွန်ပေအပျက်အယွင်းခြင်းမှပါနှင့်နားလည်သဘောပေါက်ကျော်ကြား Amalfi ကမ်းရိုးတန်းမှ.
စိတျထဲတှငျကြောင်းနှင့်အတူ, ကျနော်တို့ငါတို့သည်သင်တို့ Naples ကနေခုနစ်လုံးကိုအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်များ၏အန္တိမစာရင်းပေးခြင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟုထင်, အီတလီ. ကျွန်တော်တို့ကိုစတင်ဖို့ပါစို့:
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေးအဆိုပါ Eco Friendly Way ကိုရန်ခရီးသွား Is. thဆောင်းပါးရထားခရီးသွားနေဖြင့်တွေအကြောင်းပညာပေးတိကျမ်းစာ၌လာသည်ကားဖြစ်ပါတယ် တစ်ဦးကရထား Save, ကမ်ဘာပျေါမှာစျေးအချိုဆုံးရထားလက်မှတ်တွေဝက်ဘ်ဆိုက်.
1. အကောင်းဆုံးနေ့ထဲကတစ်ခု Naples မှစ. Trips: ဟာကြူ၏အပျက်အယွင်း
ကျနော်တို့သိသာနှင့်အတူမစတင်ရန်လိုချင်ပေမယ့်လူမသိ. ဟာကြူပွန်ပေ၏လျော့နည်းကျော်ကြားဝမ်းကွဲဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါယခုကျော်ကြားသော 79 တောင်ပေါ်က Vesuvius ၏အေဒီမီးတောင်ပေါက်ကွဲမှု ပွန်ပေနှင့်အိမ်နီးချင်းဟာကြူနှစ်ဦးစလုံးဖကျြဆီးခံရ.
သို့သျောလညျး, ယနေ့တွင်, လူအပေါင်းတို့သည်ဂုဏ်ထူးပွန်ပေကိုသွား. နီးပါးကမ္ဘာပေါ်မှာရှိသမျှသောလူတစ်ဦးပွန်ပေကဘာလဲဆိုတာသိတယ်, ဟာကြူအကြောင်းကိုသေးအနည်းငယ်သိ. သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုမမေးလျှင်ဒါကကြီးမားတဲ့အရှက်ကွဲ.
ပထမဦးဆုံးအနနေဲ့, ဟာကြူပိုပြီးထိန်းသိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျရှိရသည့်အခါ, သငျသညျအမြားဆုံးအိမ်များနှင့်အခြားအထိမ်းအမှတနီးပါးနဂိုအတိုင်းတှေ့လိမျ့မညျ.
ဒုတိယ, ဟာကြူခဲစည်ကားနေသည်. ကျနော်တို့ပြီးသားတောင်းသည်အတိုင်း, ဤအအပျက်အယွင်းများမှာ ဒီထက်လူသိများနှင့်သွားရောက်ကြည့်ရှုနေကြသည် သေးငယ်နံပါတ်များအတွက်. သာ. ကြီးမြတ်အသေးစိတ်ကြည့်ရှုဖို့လည်းသေးငယ်လွယ်ကူသည်.
ဧည့်ဟာကြူအလွန်လွယ်ကူသည်, အဖြစ် ရထား တိုင်းနာရီသို့မဟုတ်ဒါ Naples ကနေသွားပါ. သင်တို့သည်ဤအပျက်အယွင်းကြည့်ဖို့ကအများကြီးရှိပါလိမ့်မယ်သကဲ့သို့သင်တို့ကိုပင်အချိန်အကြောင်းကိုစိုးရိမ်ရန်မလိုပါ.
ဟာကြူကပိုလှပသော်လည်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်အတွက်, သငျသညျပွန်ပေလက်လွတ်မနိုင်. ကောင်းစွာ, နေပယ်လ်ကနေအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်အမြဲပါဝင်သည်ရန်ရှိသည် ပွန်ပေနှငျ့ဟာကြူနှစ်ဦးစလုံး.
အားကြီးသော Vesuvius ၏အရိပ်၌နေပယ်ဘဝတစ်ခုလုံးကိုမြို့. သို့သျောလညျး, သာပွန်ပေစစ်မှန်စွာက Vesuvius ၏အစွမ်းသတ္တိကိုသိကြောင်းပြောနိုင်ပါသည်. သည့်အခါပေါင်ပေ၌သငျတောငျပျေါတွေ့နိုင်ပါသည်, သငျတို့သညျအမှနျတကယျဥရောပမှာတစ်ခုတည်းသောတက်ကြွမီးတောင်၏ခွန်အားနားလညျနိုငျ.
သငျသညျပွန်ပေကိုသွားသည့်အခါ, သငျသညျအဆင်သင့်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်. အရပျကိုလူအများစုထင်ထက်ပိုမိုကြီးမားဖြစ်ပါသည်, သငျသညျအဖြစ်အစောပိုင်းသင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်သွားရန်ရှိသည်ဒါ. ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, သငျသညျနွေရာသီအတွက်သွားလျှင်, အရမ်းပူ, ဒါကြောင့်သင်ရေအများကြီးယူဆောင်လာရန်လိုအပ်မည်.
သို့သျောလညျး, ပွန်ပေမှရတဲ့အလွယ်ကူဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. သငျသညျလျင်မြန်စွာ Naples ကနေရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် မီးရထားကနေတဆင့်, နေ့ကိုတလျှောက်လုံးရှိတတ်ရာ.
Torre Del ဂရိပွန်ပေမှလေ့
ပွန်ပေ Nocera အောက်ပိုင်းမှရထား
Salerno Nocera ယုတ်ညံ့ဖို့ရထား
3. အကောင်းဆုံးနေ့ထဲကတစ်ခု Naples မှစ. Trips: တောင်ပေါ်က Vesuvius
သဘာဝကျကျ, နေပယ်ရန်မအလည်အပတ်ခရီး Vesuvius မြင်နေမပါဘဲပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်. သငျသညျစာသားဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နီးပါးဘယ်နေရာမှာမဆို Naples အတွက်မှမြင်နိုင်သည့်၎င်း၏ကြီးမားသောအရွယ်အစားကကိုမြင်လျှင်မပါဘဲမသွားနိုင်.
သို့သျောလညျး, သငျသညျအကောင်းဆုံးမဟုတ်အဝေးကကြောင့်တွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အားဖြင့် ပေါ်မှာရပ်နေ. တောင်တော်အလွန်အရပ်ရှည်ရှည်ဖြစ်ပါသည်, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲထားတဲ့စနစ်တကျခရီးစဉ် ယူ. တစ်နာရီဒါမှမဟုတ်ဒီထက်တက်ခွနိုင်ပါတယ်. သင်ကစိန်ခေါ်တှေ့လိမျ့မညျ, သင်မူကား, ထိပ်မှာရရှိမည်အတွေ့အကြုံကလုံးဝထိုက်သည်.
တောင်ပေါ်က Vesuvius ရောက်ရန်, သင်လိုအပ်အပေါငျးတို့သ Ercolano Scavi ဘူတာရုံမှအောက်ခြေအနီးသင်ယူနေပယ်လ်ကနေအစာရှောင်ရထားယူရန်ဖြစ်ပါသည်. ထိုအခါသင်၏တဦးတည်းယူရန်လိုအပ်ပါတယ် Vesuvio Express ကို အဆိုပါအတန်အသင့်၏ စတင်. ပွိုင့်ရန်သွားသောဘတ်စ်ကား စိန်ခေါ်တိုးမြှင့်.
Salerno Mercato စန်း Severino မှရထား
Pescara Naples မှရထား
Manziana ရထားမှ Bracciano
စန်တာ Marinella Bracciano ရထားမှ
4. အဆိုပါ Amalfi ကမ်းခြေတွင် Positano
တစ်ခုလုံး Amalfi ကမ်းခြေ ကိုယ့်ကိုတှေ့မွငျခံရဖို့တောင်းစားနေပါတယ်. သငျသညျအဲဒီမှာ go ပြီးတာနဲ့, သငျသညျကိုလျင်မြန်စွာအဘယ်ကြောင့်နားလည်သဘောပေါက်. အဆိုပါအကြီးအကျယ်ကမ်းပါးကိုကွောကျရှံ့ဖှယျများမှာ, နှင့်သမုဒ္ဒရာ၏အလှတရား ပြော. မကုန်နိုင်ဖြစ်ပါသည်.
သင်လုပ်ဖို့ ... လိုပါတယ် ရထားယူ Sorrento သို့မဟုတ် Salerno ဖြစ်စေရန်စီးနင်း. ထိုအခါသင် Amalfi ကမ်းခြေဖြတ်သန်းသောသေးငယ်သောလမ်းများကူးဖို့ဘတ်စ်ကားယူသို့မဟုတ်တစ်ကားငှားလို့ရပါတယ်.
Positano ကမ်းရိုးတန်းအလယ်၌လက်ျာသည်နှင့်အများဆုံးဖြစ်ပါသည် လှပသောမြို့ ကပေါ်. သငျသညျအစဉ်မပြတ် Amalfi ကမ်းခြေပေါ်မှာမြို့များကိုမဆိုဓါတ်ပုံတွေကိုတွေ့ခဲ့ရင်, သငျသညျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိ Positano မြင်ကြပြီ. တမြို့လုံးဝန်းရံသောကျော်ကြားမှုထိုက်တန်တဲ့ဖြစ်ပါသည်, ရှုခင်း breathtaking ကြောင့်.
Salerno Naples မှရထား
Taranto Naples မှရထား
5. အကောင်းဆုံးနေ့ထဲကတစ်ခု Naples မှစ. Trips: Sorrento
Sorento အဆိုပါ Amalfi ကမ်းခြေ၏ဆန့်ကျင်ဘက်အခြမ်းပေါ်မှာထိုင်မယ့်သေးငယ်တဲ့မြို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာအရှင် Naples ပိုမိုနီးကပ်စွာဖြစ်ပါသည်, သငျတို့သလည်းအလွန်လွယ်ကူစွာမှတဆင့်ကရောက်ရှိနိုင်ပါတယ် ဒေသခံရထား လိုင်းများ.
မြို့ဒီကဗျာကမ်းခြေ၏စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်တစ်ဦးခမ်းနားအဟောင်းကိုမြို့ဂုဏ်ယူ. လူအများစု Sorrento ကိုသွား, မပင်လယ်နှင့်ကြောက်စရာကမ်းပါးများအတွက်, ဒါပေမယ့်သမိုင်းအဘို့. Sorrento အမှန်တကယ် quintessential ဟောင်းအီတလီမြို့တစ်မြို့ဖြစ်ပါတယ်. ဒါဟာတောင်သာသေးငယ်တဲ့အီတလီမြို့ကြီးများရှိနိုင်ပါသည်စစ်မှန်တဲ့ဟောင်းအီတလီဝိညာဉျတျောကြောင်း Naples ထက်အများကြီးသေးငယ်သည်နှင့်ရှိပါတယ်.
ထိုအရာ၏ထိပ်တွင်, သင် ... သင့်တယ် ကျိန်းသေ Sorrento သွားရောက်ကြည့်ရှု ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Capri ၏ Naples မှသင်၏အကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်များထဲကတစ်ခုအပေါ်. Capri ၏ကျွန်းနီးကပ်ခြင်းဖြင့်သည်နှင့်ဝေးအားဖြင့်သင်တို့ကိုအစဉ်အဆက်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်အလှဆုံးသေးငယ်တဲ့ကျွန်းတနိုင်ငံအရပ်တို့သည်တစ်ခုဖြစ်တယ်.
Foggia Naples မှရထား
Tivoli Naples မှရထား
Temoli Naples မှရထား
Naples ရထားမှ Lecce
6. Ischia ကျွန်း
အများအပြားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ကျွန်းများ Naples ဝန်းရံ. သို့သျောလညျး, ဝေးနေဖြင့်အလှဆုံးတဦးတည်း Ischia ဖြစ်ပါသည်, ဒီမှာအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်:
Ischia Naples ၏ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာအကြီးဆုံးကျွန်းဖြစ်ပြီး
Ischia ကအားလုံးကိုရှိပါတယ်: ကမ်းခြေ, အပူရေပိုင်နက်အတွင်း, စားသောက်ဆိုင်, နှင့်ခမ်းနားအဆောက်အဦးများ
ဒါဟာ Naples အတွက်အပန်းဖြေမှုအတွက်အကောင်းဆုံးနေရာဖြစ်ပါသည်. သင်တို့သည်လည်း Naples ၏ဗဟိုကနေလှေကိုယူပြီးအားဖြင့်လျင်မြန်စွာကရနိုင်.
Salerno Maratea မှရထား
Bari က Maratea မှရထား
Maratea ရထားမှ Naples
7. Reggia Di Caserta: အဆိုပါအီတလီဗာဆိုင်း
သူတို့ကဒီဧရာမခေါ်ပါဘူး 1200 အခန်းထဲမှာနန်းတော်အချည်းနှီးအအီတလီဗာဆိုင်း. နန်းတော် ဧရာမတက်လှေကားများအပြင်နှငျ့ပွညျ့စုံပြီးဖြစ်ပါသည် ယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များ. သင်တို့သည်လည်းခမ်းနားထည်ဝါစွာတော်ဝင်တိုက်ခန်းများနှင့် presepi တစ်ဦးစုဆောင်းမှုကိုတွေ့လိမ့်မည် - ခရစ်စမတ် Naples ၏ cribs.
အလုံးစုံ, သင်ဤကြီးမားနန်းတော်သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်မှားယွင်းတဲ့မသွားနိုင်. သငျသညျ Naples အတွက်ဗဟိုဘူတာမှရထား ယူ. Caserta ဘူတာရုံမှာထွက်ရနိုင်. နန်းတော်နောက်မှသာတိုတောင်းတဲ့လမ်းလျှောက်ဖြစ်ပါသည်.
Caserta ရထားမှ Naples
Salerno Caserta မှရထား
Bari က Caserta မှရထား
ဒါကြောင့်, အဲဒီမှာသူတို့ကိုသင်တို, နေပယ်လ်ကနေခုနစ်လုံးကိုအကောင်းဆုံးနေ့ကခရီးစဉ်. သင်အမှန်တကယ် Naples ၏ဂုဏ်အသရေကိုတွေ့ကြုံခံစားချင်တယ်ဆိုရင်, သင်တို့သည်ဤခရီးစဉ်၌ရှိသမျှအပေါ်သွားကြဖို့လိုအပ်. လည်း, သင်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်လိုလျှင်, အဆက်အသွယ်အခမဲ့ခံစားရ တစ်ဦးကရထား Save.
လုပ်ချင်တိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်ပို့စ် “7 နေပယ်မှာအီတလီနိုင်ငံကနေအကောင်းဆုံးနေ့ခရီးများထွက်ခြင်း” သင့်ရဲ့ site ကိုပေါ်ကို? သင်ဟာတစ်ခုခုကိုလုပ်နိုင်အယူကျွန်ုပ်တို့၏ဓါတ်ပုံများနှင့်စာပေးပြီးခရက်ဒစ်နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဖို့ဒီဘလော့ပို့စ်. သို့မဟုတ်ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https://www.saveatrain.com/blog/best-day-trips-naples/?lang=my ‎- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)
Daytrips europetravel italyvacation Naples နေပယ် Tranride ရထားအကြံပေးချက်များ travelitaly traveltips